"ဆိုကရေးတီး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဆိုကရေးတီး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၀:၄၄၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ
အရွယ်အစားများ ပြောင်းလဲမှု မရှိ , ပြီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်
Reverted2edits by 111.84.195.6 (talk) identified as vandalism to last revision by 111.84.195.84. (TW)
၁၀:၃၇၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၄၄၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (Reverted2edits by 111.84.195.6 (talk) identified as vandalism to last revision by 111.84.195.84. (TW))
ဘီစီ ၅၀ဝ ပြည့်နှစ်ခန့်က [[ဂရိနိုင်ငံ]] [[အေသင်မြို့]]တော်၌ ဆိုကရေးတီး အမည်ရှိသော ပညာရှင်တစ်ဦးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
== ဆိုဖစ္ဆိုဖစ် ==
ထိုခေတ်က အေသင်မြို့သားများသည် ပညာကို အထူးလိုလား ကြသဖြင့် အကြောင်းသင့်ရာသင့်ရာ စုဝေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလေ့ ရှိကြသည်။ ထိုသို့စုဝေးကြသော လူတစ်စုကို “ ဆိုးဖစ် ” ဟုခေါ် ၏။ ဆိုးဖစ်တို့သည် စကား၏ပရိယာယ်၌ လိမ်မာ၍၊ ဆွေးနွေးရာတွင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံသည်ထက် စကားနိုင်လု၍ ငြင်းခုံလေ့ရှိကြသည်။
ဆိုကရေးတီးသည် သူ၏အယူအဆများကို စာဖြင့်တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မရေးသားခဲ့ချေ။ သူ၏တပည့်များဖြစ်ကြသော သမိုင်းဆရာကြီး ဇင်းနိုဖန်နှင့် ပညာရှိကြီး [[ပလေတို]]တို့က မိမိတို့ဆရာ၏ ဩဝါဒကထာကို နောင်လာ နောင်သားတို့ လေ့လာနိုင်စေရန် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်းသာ ရှိ လေသည်၊ ထိုသူနှစ်ဦးကြောင့် ဆိုကရေးတီး၏ အယူအဆ အတွေးအခေါ်နှင့် ဩဝါဒတို့သည် ဂရိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ထင်ရှားကျော်စောစေခဲ့သည်။
== ငယ္ဘဝငယ်ဘဝ ==
ဆိုကရေးတီးသည် အေသင်မြို့တော်၏ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်၌ မွေးဖွား၍၊ သူ၏ဖခင်မှာ ပန်းပုဆရာဖြစ်သည်။ပန်းပု ပညာကို သင်ကြားလေ့လာစဉ်က ပညာကိုကောင်းစွာမသင်ခဲ့ရချေ။ ဖခင်၏ ပန်းပုပညာကို သင်ယူလျက်၊ ပန်းပုဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ထိုအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်၍ အမှန်တရားကို စဉ်းစားကြံဆခြင်းဖြင့် ပျော်ပိုက်နေလေသည်။သူသည်နေရေး စားရေးအတွက် မပူပင်ချေ။ ရောင့်ရဲလွယ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိ၏။ ကြံ့ခိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိလေသည်။ အတန်ငယ် စားရုံအိပ်ရုံနှင့် နေနိုင်သော သတ္တိရှိရကား စီးပွားရှားဖွေခြင်းကို မပြုဘဲ အမှန်တရား ကိုသာ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်လွန်စေခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/248418" မှ ရယူရန်